Fianarana an-tserasera an-tserasera 10 an-tserasera | Famoronana an-tserasera
Ny taranja Adobe Illustrator 10 tsara indrindra amin'ny Internet
Lola curiel | | Graphic Design, General, sary
1 Aiza no hianarana Adobe Illustrator amin'ny Internet
2 Fampianarana Adobe Illustrator ho an'ny vao manomboka
2.1 Fampidirana ny Adobe Photoshop
2.2 Illustrator CC ho an'ny Newbies - Avy amin'ny Zero mankany amin'ny manam-pahaizana!
2.3 Adobe Illustrator: Sary Vector avy amin'ny Scratch
3 Courses Thematic an'ny Adobe Illustrator
3.1 Adobe Illustrator ho an'ny maha-izy anao azy
3.2 Adobe Illustrator ho an'ny typography, taratasy ary kaligrafi
3.3 Drafitra vita pirinty - Prepress ho an'ny offset ao amin'ny Illustrator
3.4 Adobe Illustrator for Architecture
3.5 Vector art: taratra ny fombanao miaraka amin'ny Illustrator
4 Fandaharana Advanced Adobe Illustrator
4.1 Advanced Adobe Illustrator ho an'ny sary
Aiza no hianarana Adobe Illustrator amin'ny Internet
Raha liana amin'ny famolavolana sary ianao ary te hianatra misimisy kokoa momba ny sary vector, azonao atao amin'ny solosainao izany, nefa tsy miala ao an-trano. Misy sehatra marobe izay manolotra fampianarana mifantoka amin'ny fanatsarana ny fampiofanana anao amin'ny Adobe Illustrator, toy ny: Domestika, Undemy na Crehana. Tena malalaka ny tolotra, noho izany izahay dia nanao safidy momba ireo fampianarana Illustrator tsara indrindra azo jerena ao amin'ny Internet, mba hahafahanao misafidy ny iray mety indrindra amin'ny haavonao sy ny zavatra mahaliana anao
Fampianarana Adobe Illustrator ho an'ny vao manomboka
Fampidirana ny Adobe Photoshop
Fanamarihana tsara 98%
Horonan-tsary 10/9 m
Fianarana fototra 5 an'ny Illustrator
Fanaterana mari-pankasitrahana amin'ny farany
Ity lalan'ny fampidirana ny Adobe Illustrator, ampianarin'i Aarón Martínez, dia ny mety hanombohana amin'ny programa. Toy ny taranja Domestika rehetra, rehefa mividy azy ianao dia manana fidirana tsy voafetra, mba hahafahanao maka izany amin'ny hafainganana manokana. Tena feno, dia misy sakana 6, lesona 77 Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia mandeha amin'ny fanazavana lehibe indrindra ka hanome anao ny ambaratonga ampy hanaovana asa kalitao amin'ity rindrambaiko ity. Amin'ity fampianarana ity:
Hianaranao ny mihetsika manodidina ny interface ary hampiasa ireo fitaovana ilaina indrindra.
Ho hitanao ny fomba ataovy nomerika ny sary.
Hiara-miasa amin'ny loko ianao, hamorona palety ianao ary hianatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fomba loko isan-karazany.
Hamorona ianao lahatsoratra manintona.
Ho hitanao ny fomba hanatsarana ny volanao hamoaka azy ireo amin'ny Internet na hanonta azy ireo.
Illustrator CC ho an'ny Newbies - Avy amin'ny Zero mankany amin'ny manam-pahaizana!
4.5 / 5 naoty
Lesona hianarana ny tsiambaratelo rehetra amin'ny sfotware
Raha ny tanjonao mianatra mibaiko ny programa toa ny manam-pahaizana, liana amin'ny famolavolana sary ianao ary te hianatra ny fomba fanaovana logo na fanoharana, ity no làlana tadiavinao. Ahitana fizarana 10, kilasy 96 total, izay hahazoanao ny fahalalana ilaina rehetra hanararaotana ireo hevitra noforoninao indrindra, na dia mbola tsy nilalao ilay programa aza ianao taloha!
Mazava ho azy fa tena feno, izay ampianarana ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fampiharana azo ampiharina ary mikasika ny famolavolana 3D aza. Azonao atao ny miditra amin'ilay làlana isaky ny tianao, na dia vitao aza, azonao atao ny mamerina ny lesona im-betsaka araka izay ilainao mandra-pahatsapanao fa azonao izany.
Adobe Illustrator: Sary Vector avy amin'ny Scratch
Horonan-tsary 8/3 m
Ianaro ny fototry ny fanoharana vector
Este Mazava ho azy Domestika, ampianarin'ny mpanorina ny studio famoronana Marmota vs Milky, safidy tsara hafa koa hanome anao dingana voalohany ao amin'ny Adobe Illustrator. Izy io dia voaforona 6 sakana, lesona 58 amin'ny ankapobeny, izay hianaranao ny zava-drehetra momba ny fitaovana sy ny tsara baterian'ny toro-hevitra ho anao hamoronana sary tany am-boalohany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny Mazava ho azy fa izany mifantoka amin'ny fananganana portfolio-nao manokana, noho izany dia tsy hahazo fanazavana fotsiny momba ireo fitaovana sy teknika ilaina indrindra ianao, fa hanana ihany koa ny fotoana hahazoanao aingam-panahy sy hampivelatra ny fahaizanao mamorona hevitra mamorona.
El ny tsy fetezana ihany dia ny teny portiogey, fa aza taitaitra, azonao atao ny mampihetsika ny sDikanteny Espaniola ary amin'ny fiteny efatra hafa.
Courses Thematic an'ny Adobe Illustrator
Adobe Illustrator ho an'ny maha-izy anao azy
Fanamarihana tsara 97%
Horonan-tsary 7/30 m
Mianara mamolavola ny mombamomba ny marika
Ny maha-maso dia ny fanehoana marikaRaha vao jerena, dia mahay mamindra ny soatoaviny sy ny fanahiny ary manampy azy hanavaka ny tenany amin'ilay fifaninanana. Adobe Illustrator ho an'ny maha-izy anao azy, dia taranja Domestika izay hianaranao mahafehy ny programa hamolavola ireo mari-tsary sy loharano rehetra izany dia maneho ny marika.
Izy io dia voaforona 6 sakana, lesona 48 amin'ny fitambarany dia manomboka amin'ny fototra indrindra izy ireo, noho izany dia tanteraka mety ho an'ny vao manomboka.
Adobe Illustrator ho an'ny typography, taratasy ary kaligrafi
Fanamarihana tsara 96%
Horonan-tsary 3/39 m
Volavola Calligraphic ao amin'ny Adobe Illustrator
Este fonosana fampianarana Domestika 5 tonga lafatra ho an'ny tia ny endritsoratra sy ny litera. Ny maha formation izay manomboka amin'ny a fanazavana ny fomba fiasan'ny Illustrator ary amin'ny fomba fivezivezena manodidina ny interface, azonao atao izany na dia tsy fantatrao mihitsy na inona na inona momba ilay programa. Amin'ny lesona 44 dia hianaranao:
Lo tena ilaina amin'ny fampandrosoana mahay logiciel
Ahoana ny fitaovana ilaina indrindra
Manararaotra ny hafa endritsoratra typografika sy teknika hampiavaka azy ireo
A mamorona endritsoratra ho anao manokana
Teknika sy fitaovana hahazoana sasany famaranana matihanina bebe kokoa
Drafitra vita pirinty - Prepress ho an'ny offset ao amin'ny Illustrator
Jereo ny fomba fanomanana ny volavolanao amin'ny fanontana offset
Ity fampianarana ity dia ny voatondro ho an'ireo efa natomboka tamin'ny programa mitady hianatra bebe kokoa momba ny fanomanana asa ho an'ny fanontana offset ary ho an'ny mpiasa mpanao pirinty, mpikirakira sary na mpamorona sary izay liana amin'ity sehatra manokana ity. Hanazava ireo fitaovana ilaina izy ireo ho an'ny fifehezana ny tany am-boalohany ho an'ny fanontana offset dia holazain'izy ireo aminao ny fetran'ity rafitra fanontana ity ary ireo toetra tokony hananan'ny fisie orizinaly. A Mazava ho azy fa matihanina, mifantoka amin'ny fahazoana vokatra matihanina bebe kokoa, fitsitsiana loharanom-bola ary fotoana.
Adobe Illustrator for Architecture
3.9 / 5 naoty tsara
Horonan-tsary 2/30 m
Adobe Illustrator dia nampiharina tamin'ny maritrano
Ity dia ity natokana ho an'ny mpanao mari-trano, mpamorona atitany, injenieran'ny fananganana trano ary mpanao drafitra te hianatra hampiasa Illustrator hanolotra ny tetikasan'ny maritrano. Ny sary dia manana lanja lehibe raha ny amin'ny fanehoana hevitra amin'ny mpanjifa ary miaraka amin'ity fampianarana ity dia ho azonao atao ny mitondra ny volonao any amin'ny ambaratonga manaraka. Ny Mazava ho azy misy koa ny fampidirana amin'ny fikirakirana ny rindrambaiko, ka tsy mila nampiasa azy io taloha, dia hianatra rehefa mandeha.
Vector art: taratra ny fombanao miaraka amin'ny Illustrator
Fanamarihana tsara 100%
Horonan-tsary 4/58 m
Jereo ny fahaizanao mamorona
Liana amin'ny fanaovana sary sy fanoharana ve ianao? Adobe Illustrator dia programa quintessential amin'ny fiasa miaraka amin'ny sary vector. Amin'ity fampianarana ampianarin'ny mpanao sary Daniele Caruso ity hianaranao ireo teknika ilaina hisamborana ny hevitrao ary handraisanao ny dingana voalohany eo amin'ny tontolon'ny zavakanto vector. Ny zavatra tsara indrindra dia tsy mila manana traikefa teo aloha ianao niara-niasa tamin'ny Illustrator satria, na dia tsy fampianarana fampidirana ho an'ny programa aza izy io, dia hanazava izay rehetra ilainao ho fantatra sy ny fomba azonao atao ny mandray ny lesona amin'ny hafainganam-pandehanao, tsy hanana olana ianao. Amin'ny teny anglisy ny fampianarana, fa manana Dikanteny Espaniola
Fandaharana Advanced Adobe Illustrator
Advanced Adobe Illustrator ho an'ny sary
Horonan-tsary 11/22 m
Miakatra amin'ny ambaratonga manaraka
Ity fampianarana nataon'i Aarón Martínez ity dia tonga lafatra hampitombo ny haavonao sy ny fahaizanao amin'ny Adobe Illustrator. Mba hanaovana izany dia ilaina ny fahalalana ilay programa, noho izany Raha mbola tsy nampiasa azy ianao dia tsara kokoa ny atombohy amin'ny làlana fampidirana mankany amin'ny Adobe Illustrator izay atolotray amin'ny fiandohan'ny lahatsoratra ary avelao izany aorian'izay. Izy io dia voaforona Blaogy atiny 5, lesona 49 amin'ny fitambarany, mifantoka amin'ny fianaranao ireo teknika lehibe indrindra momba ny fanoharana. A Mazava ho azy fa tena azo ampiharina, hianaranao ny mamorona sary amin'ny style "desing fisaka", fironana farany amin'ny Internet; ianao no hamolavola a mascot fanaovana dokam-barotrato, milalao miaraka paleta miloko sy endritsoratra samihafa; ary ho hitanao ny fomba famolavolana sary fanontana miaraka amin'ny volavola, amin'ny fampiasana ny fitaovana "gradient".
4.8 / 5 naoty
Fantaro lalindalina ilay programa
Ity fampianarana ampianarin'i Marlon Ceballos, Adobe Applications Consultant ity, 100% azo ampiharina ary hanampy anao hampiasa ireo teknika sy fitaovana mandroso indrindra amin'ity rindrambaiko ity famolavolana hitondra ny asanao any amin'ny ambaratonga manaraka. Nandritra ny fampianarana, hahazo rakitra hampihetsi-po ianao ary amin'ny faran'ny sampana tsirairay dia hanao tetik'asa hanamafisana izay rehetra nianaranao ianao. Inona koa, ny vidiny dia misy koa ny fidirana amin'ireo serivisy an-tserasera toy ny Adobe Color na ny fampiharana finday Adobe Capture.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny taranja Adobe Illustrator 10 tsara indrindra amin'ny Internet
Ahoana ny fanovana sary ho an'ny Instagram